Budada AICAR budada (2627-69-2) Soosaarayaasha - Kiimikada loo yaqaan 'Phcoker'
Budada AICAR, oo sidoo kale loo yaqaan 'AICA riboside', waa saxeex khafiif ah oo leh waxqabadka antineoplastic iyo firfircoonida xulashada ee AMP-firfircoon …… ..
Root AICAR budada (2627-69-2) video
Root AICAR budada (2627-69-2) Sharaxaad
Kalluunka AICAR oo sidoo kale loo yaqaanno ZMP waa analog AMP oo awood u leh inuu kiciyo waxqabadka kiniiniga AMP-ku tiirsan (AMPK). Dufanka AICAR waa mid dhexdhexaad ah jiilka of monofosphate inosine. Daawada budada AICAR waxaa loo adeegsadaa in lagu daaweeyo loona ilaaliyo dhaawaca wadnaha iskudhaca wadnaha, waxay geli kartaa unugyada wadnaha si loo joojiyo adenosine kinase iyo adenosine deaminase. Waxay kobcinaysaa heerka nukleotide dib u-soo-saarka kordhinta jiilka adenosine oo ka soo jeeda adenosine monophosphate oo keliya inta lagu jiro xaaladaha ischemia mareenka. Daawada budada AICAR waxay kor u qaadeysaa guluukoosta kor u qaadista adigoo ku dhejinaya sheyga GLUT4 iyo / ama ayadoo la adeegsanaayo wadada p38 MAPK. Xilligan, daroogada ayaa sidoo kale lagu muujiyey inay tahay daaweyn suurta gal ah in sonkorowga la kordhiyo dhaqdhaqaaqa jirka ee unugyada iyadoo la beddelayo qaabka jireed ee muruqa.
Budada cayriin AICAR (2627-69-2) Smamnuucista
Product Name Budada AICAR
Magaca Kiimikada 1-ribosyl-4-carboxamido-5-aminoimidazole, ARA 100, ARA-100, ARA100, GP 1 110, 5-aminoimidazole-4-carboxamide 1-ribofuranoside, 5-aminoimidazole-4-carboxamide riboside, acadesine, AICA ribofuranoside, AICA riboside, aminoimidazole carboxamide ribonucleoside, arasine, Z-riboside
Fasalka Daroogada SARM
Molecular Wsideed 258.23
barafku Psaliid 214-215 ° C
Fdib u soo celinta Psaliid 214 ° C
Biological Life-Life Aad u gaaban
Budada AICAR Application Dhaqdhaqaaqa AMPK
Budada Raw AICAR sidoo kale loo yaqaan ZMP waa analog ah AMP, waa unug-permeable, firfircoonida allosteric ee AMP-activated protein kinase (AMPK). Waxay awood u leedahay kicinta waxqabadka AMP-ku-tiirsan protein kinase (AMPK), kordhinta kordhinta, kala-duwanaanta iyo macdanta unugyada osteoblastic MC3T3-EI waxayna yareyneysaa muujinta cilmu-nafsiyeed ee cytokines proinflammatory iyo iNOS ee astrocytes.
Dufanka AICAR waa mid dhexdhexaad ah jiilka of monofosphate inosine. Daawada budada AICAR waxaa loo adeegsadaa in lagu daaweeyo loona ilaaliyo dhaawaca wadnaha iskudhaca wadnaha, waxay geli kartaa unugyada wadnaha si loo joojiyo adenosine kinase iyo adenosine deaminase. Waxay kobcinaysaa heerka nukleotide dib u-soo-saarka kordhinta jiilka adenosine oo ka soo jeeda adenosine monophosphate oo kaliya inta lagu jiro xaaladaha ischemia mareenka. Daawada budada AICAR waxay kor u qaadeysaa guluukoosta kor u qaadista adigoo ku dhejinaya sheyga GLUT4 iyo / ama ayadoo la adeegsanaayo wadada p38 MAPK. Xilligan, daroogada ayaa sidoo kale lagu muujiyey inay tahay daaweyn suurta gal ah in sonkorowga la kordhiyo dhaqdhaqaaqa jirka ee unugyada iyadoo la beddelayo qaabka jireed ee muruqa.
AICAR waa fiyuus la nadiifiyo waxqabadyada antineoplastic. Waa muhiim in la daaweeyo cudurrada dheef-shiid kiimikaad sida nooca sonkorowga 2 iyo sidoo kale daaweynta suurtagalka ah ee noocyada kala duwan ee kansarka.
Budada AICAR (2627-69-2) Mashruuca Hawlaha
Nucleoside ee AICAR, acadesi, waa analog of adenosine oo galaya unugyada wadnaha si loo joojiyo adenosine kinase iyo adenosine deaminase. Waxay kobcinaysaa heerka nukleotide dib u-soo-saarka kordhinta jiilka adenosine oo ka soo jeeda adenosine monophosphate oo kaliya inta lagu jiro xaaladaha ischemia mareenka. Cudurka maan-dooriyaha wadnaha, acadesi waa fosforylated AICAR si ay u-hawlgalaan AMPK iyada oo aan wax ka beddelin heerarka nucleotides. AICAR waxay awood u leedahay inay gasho jidka loo yaqaan 'de novo' ee loo yaqaan 'adenosine synthesis' si loo joojiyo adenosine deaminase taasoo keeneysa kororka heerarka ATP iyo heerarka adenosine.
Codsiga budada AICAR (2627-69-2)
Drug Daroogada kordhiya waxqabadka
Up Qaadashada sonkorta leh ee kiciya
Ator Dhaqdhaqaaqa AMPK
Disorders Cilladaha dheef-shiid kiimikaadka
Cudurka 'lymphoblastic leukemia' oo daran
talinayo Budada AICAR (2627-69-2)
Qiyaasta daawada AICAR waxay kala duwanaan kartaa xmUMX mg maalin kasta, haddii aad u gesho GW, ilaa qiyaasta 150 mg maalintii markaad u isticmaasho. Dhalada oo dhan waxay caadi ahaan ku dhacdaa xaddiga mgmaanka 500, sidaa daraadeed way cadahay qaali. Sababtan awgeed, waxa macquul ah in la isticmaalo afartii toddobaad ee ugu dambeysay ka hor maalinta tartanka.
Faa'iidooyinka Budada AICAR (2627-69-2)
♦ AICAR waa fiyuus furan oo leh hawlgal antineoplastic ah. Waa muhiim in la daaweeyo cudurrada dheef-shiid kiimikaad sida nooca sonkorowga 2 iyo sidoo kale daaweynta suurtagalka ah ee noocyada kala duwan ee kansarka.
♦ codsiga AICAR ee lagu daaweynayo xanuunada dheef-shiid kiimikaadka.
♦ AICAR waxay leedahay karti ku daweynaya daaweynta cudurka neuroinflammatory-ka kaas oo microglia-ka firfircooni ka ciyaara kaalin habboon.
♦ Caawinta AICAR si loo hagaajiyo mashiinka, shaqada xusuusta iyo shaqada maskaxda
♦ AICAR waxaa ugu wanaagsan in loo isticmaalo sidii loogu daro duldul qaadista. Ciyaartoyda ayaa sidoo kale u adeegsanaya waxtarka kor u qaadista cayaaraha halka ay u baahan yihiin dulqaad.
IC AICAR waa analoogga loo yaqaan 'nucleoside analogue' kaas oo awood u leh inuu galo barkadaha nucleoside wuxuuna awood u leeyahay inuu si weyn u kordhiyo heerarka adenosine inta lagu jiro xilliyada burburka ATP. Wakaaladaha xakamaynta Adenosine (ARAs) ayaa loo aqoonsaday awoodda daaweynta ee myocardial ischemia.
♦ AICAR waxaa loo isticmaalaa daaweynta xanuunka lymphoblastic-ka ee laf-dhabarka waxaana lagu soo warramaa in ay leedahay saameynaha wadnaha wadnaha.